Waanwaan laga dhex waday DF iyo Musharaxiinta oo guul-darreystay | KEYDMEDIA ONLINE
Waanwaan laga dhex waday DF iyo Musharaxiinta oo guul-darreystay
Waanwaan billaabatay shalay ilaa xalay, taasoo u dhaxaysa RW Rooble iyo qaar kamida xubnaha midowga musharaxiinta ayaa lagu guuldrreystay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xubno ay kamid yihiin Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor, Senatar Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid iyo Xildhibaano ayaa saacadihii lasoo dhaafay doonayay inay kulan siiyaan Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Musharaxiinta, arrintaasi ayaa suuroobi weysay kaddib markii ay adkaatay kulansiintooda.
Wararka ayaa sheegaya in golaha midowga musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya 2021 ay shuruud ku xireen la kulanka Ra’iisul Wasaare Rooble, taasi oo ah in marka hore xukuumaddu ay cudur-daar iyo raalli-gelin buuxda ka bixiso rabshadihii 19-Febaraayo ka dhacay magaalada Muqdisho, taasi oo lagu weeraray xubno kamida golaha midowga musharaxiinta oo rasaas la huwiyay, iyadoo sidoo kalena madaxweynayaashii hore iyo guddoomiyihii baarlamanka lagu weeraray Hotel kii ay dagganaayeen.
Xukuumadda ayaa u adeegsatay rasaas nool-nool baajinta bannaanbixii 19-ka Febaraayo, sidoo kale waxaa la weeraray qaar kamida musharaxiinta Hotel ay dagganaayeen kaasoo ay ka agaasimayeen Isku soo baxa, RW Xukuumadda oo hadlay dhacdadaasi kaddibna wuxuu sheegay in aysan raalli ka noqoneyn in dalka la galiyo xaalad adag, isagoo mucaaradka ku eedeeyay waxa ay wadaan in ay tahay in ay burburiyaan nidaamka dowladnimo, shacabkana ku boorriyay in ay iska diidaan.
Xubnaha soo agaasimay kulanka ee ukala dab-qaadayay labada dhinac ayaa ku guuldarreystay in ay ku qanciyaan in xukuumaddu aqbasho in ay raalli gelin ka bixiso falkii ay ku kacday 19-ka Febaraayo iyo sidoo kale in ay ku qanciyaan xubnaha midowga musharaxiinta in ay shardigaas la laabtaan, kulankana aqbalaan.
Xukuumadda ayaa mar kale ku dhawaaqday in aysan aqbali doonin iskusoobax, iyadoo sheegtay in 26 -ka Febaraayo aan la qaban karin wax bannaanbax ah oo lagu diidan yahay ama lagu taageerayo dowladda Soomaaliya.